News Archives - Dainik Headlines
5 hours ago	Featured, News 0
स्कुलमा लेखेको एउटा प्रेमपत्रको रिप्लाई क्याम्पस पढ्दा आउँछ । एउटा प्रेमिल मान्छेका लागि त्यो समय कति कष्टकर थियो होला ? समय कसरी बित्यो होला ? त्यो पत्रको जवाफ आउँदा कति आनन्द भयो होला । र प्रेम स्वीकारियो कि अस्वीकारियो । जब आफूले चाहेको मान्छेको रिप्लाई ढिलो आउँछ र त्यो पनि …
काठमाडौं। अर्घाखाँची जिल्लाको भुमिकास्थान नगरपालिका ढाकावाङका एक युवा काठमाडौँबाट पाँच दिनदेखि बेपत्ता भएका छन् । चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत शिशिर खनाल शुक्रबार जेठ १७ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन् । विगत चार दिनदेखि सम्पर्क बिहिन रहेका शिशिर खनालको खोजीका लागि परिवारजनले अनुरोध गरेका छन् । खनालसँग भएको मोबाईल नम्बरबाट …
आज साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ भने कतारी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ। युएई दिर्हाम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ६४ पैसा तोकेको छ …
बिहेको वर्ष दिन मात्रै पूरा भएको थियो। श्रीमान्, सासूससुरा सपरिवारमा निकै खुसी थियो। तर,मंसिर २ गते साँझ एक्कासि भएको घटनाले उनको जीवन अन्धकार भयो। उनको दाहिने आँखा र दाहिने कानले काम गर्दैन।कानको छेउका सत्रवटा हड्डी भाँचिएका छन्। दाहिने हात पनि चल्दैन। उपचार जारी छ। गोदामचौर १ की २१ वर्षीया बलात्कृत …
दाङ बस दुर्घटना अपडेट : मृत्यु भएका २२ जनाको शव अस्पतालमा, पाँच जनाको सनाखत
दाङ, ७ पुस । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ राम्रीमा बिहिबार भएको बस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका २२ जनाको शव राप्ती अञ्चल अस्पतालमा ल्याइएको छ । मृतकमध्ये चार महिला र १८ पुरुष रहेको र सबै शव राति ३ बजेसम्म उक्त अस्पतालमा ल्याइसकिएकाले सनाखत पनि छिटै गरिने उहाँले बताउनुभयो । सो दुर्घटनामा परी अन्य …
भर्खरै दाङमा विद्यार्थी चढेको बस भयानक दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु, बाँकी क्षतिको विवरण आउँदै
दाङ– दाङमा आज बेलुका भएको बस दुर्घटनामा परी ९ जनाको मृत्यु भएको छ। सल्यानबाट दाङ आउँदै गरेको बा ४ ख ९७६६ नम्बरको बस दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ राम्री भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परी ८ पुरुष र एक महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बस …
सामान्यतयाः दुःख वा पीडामा मानिसले दैब (भगवान)लाई पुकार्ने गर्छन् । विपत्तिका बेला रक्षा गर्न भगवानसंग प्राथना गर्छन । तर, पीडा असह्य भएपछि र एकपछि अर्को गर्दै विपत्तिको चाङ लाग्न थालेपछि भगवानप्रति पनि मानिसको विश्वास उठ्दो रहेछ र भगवानलाई नै आफ्नो विपत्तिको मुकदर्शक मान्दो रहेछ । यस्तै दृश्य देखियो विहीवार म्याग्दीको …
काठमाडौँ, ६ पुस । आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर छ । यसअघि ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज पनि ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि स्थिर छ। आज तेजावी सुन …
पानी अभावले काकाकुल मात्रै बनाएन बासै उठायो
पानीलाई जीवनको सहारा मानिन्छ। पानी छ र न त हरियाली छ। मनमोहक प्रकृतिको रनवन छ र न त्यहीँ रमाउन पाएका छन् मान्छेसहितका जीवात्माहरू। तर पाँचथर जिल्लाको यासोक कुम्मायक गाउँपालिकाको रानीगाउँ र स्याबरुम्बा उल्लिखित कथनको अपवाद बनेको छ। प्रकृतिले नै ठगेको यसलाई। पानीबिनाको माछीजस्तो भएका छन् यहाँका बासिन्दा। पानी नहुँदा काकाकुल …
विराटननगरको अस्पतालमा जन्मियो नाक र आँखै नभएको अनौठो बच्चा
मोरङमा – संसारमा अनौठा प्रकृतिका बच्चाहरुको जन्म भइरहेको छ ।कतैै दुई टाउका भएका बच्चा जन्मिन्छन् त कतै अनौठो शारीरिक अङ्ग लिएर जन्मिन्छन् । चिकित्सकहरुका अनुसार यस्ता अनौठा प्रकृतिका बच्चाहरु सँसारमा हजारौँ वा लाखौंमा एउटाको जन्म हुने गरेको छ । यस्तै अहिले मोरङको विराटनगरमा पनि एक अनौठो बच्चा जन्मिएको छ । …